Apple က iOS 11.2.5 ကို battery manager မပါဘဲလွှတ်တင်လိုက်ပြီ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple က iOS 11.2.5 ကို battery manager trace မပါဘဲထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
သုံးစွဲသူများစွာအပေါ် Apple ကသတ်မှတ်ထားသောဘက်ထရီ၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့်စားသုံးမှုနည်းသောအငြင်းပွားမှုများသည်၎င်း၏နေ့ရက်များကိုရေတွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုများသောကြောင့် iOS 11.2.5 မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကြည့်နေကြတယ်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆင့်တွင်လုပ်ဆောင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၎င်းသည် iOS မှအချိန်ကြာမြင့်စွာဆွဲဆောင်နေသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
အဖြစ်မှန်မှအဘယ်အရာကိုမျှနောက်ထပ်ဖြစ်ပါတယ် Apple က iOS 11.2.5 ကိုပဲဖြန့်ချိလိုက်ပြီးသူတို့ကသူတို့အဆိုပြုထားတဲ့ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်အသစ်ကိုမတွေ့ရပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် HomePod နှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်အသေးစားတစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်သင့်တော်သည်ဟုယူဆပါက၎င်းသည်၎င်း၏ဖြန့်ချိမှုနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။
iOS 11.2.5 တွင် HomePod အတွက်အထောက်အပံ့ပါဝင်ပြီးသတင်းများဖတ်ရန် Siri အတွက်စွမ်းရည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည် (သြစတြေးလျ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတစ်ခုတည်း) ။ ဤ update တွင် bug fixes နှင့်တိုးတက်မှုများလည်းပါ ၀ င်သည်။
တိုတောင်းခုနှစ်, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစပိန်မှာမ ၀ ယ်နိုင်တော့မယ့်ထုတ်ကုန်တစ်ခု၊ စပိန်မှာကျွန်တော်တို့မပျော်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြေငြာလိုက်တယ် (အခြားစပိန်စကားပြောသောနိုင်ငံများနှင့်) နှင့်အချို့သောတိုးတက်မှုများနှင့်အမှားပြင်ဆင်မှုများသည်နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာတုန်ခါနေလိမ့်မည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ update ကိုတစ် ဦး တည်းလာမထားပါဘူး၎င်းသည်တိုးတက်မှုများနှင့်ချို့ယွင်းမှုများပြင်ဆင်ခြင်းများပါဝင်သည့် ၄ င်း၏ watchOS 4.2.2 ဗားရှင်းကိုမလွတ်နိုင်၊ tvOS အတွက်ဗားရှင်း 11.2.5 (အတူတူပင်) နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ Spectre နှင့် Meltdown ဟုခေါ်သော Intel ပရိုဆက်ဆာအားနည်းချက်များအတွက်ထင်ရှားသောပြင်ဆင်မှုများ (၎င်းတို့သည်ယခင်ကပြင်ဆင်ထားခဲ့ဖူးသော်လည်း)
တိုတောင်းခုနှစ်, ဒီ update အသစ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောဖို့အနည်းငယ်သာရှိသည် ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ Apple ကသူ့ရဲ့တိုတောင်းသောမှတ်စုများမှာလျစ်လျူရှုသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့လျှင်အမှု၌ငါတို့သည်စမ်းသပ်ပြီးနေကြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » Apple က iOS 11.2.5 ကို battery manager trace မပါဘဲထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသူတို့ဘက်ထရီ option ကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာငါသည်သင်တို့၏မှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်, ငါ့ iphone ကို update လုပ်ဖို့ခြေလှမ်းကိုယူသည့်အခါဖြစ်လိမ့်မည်။
Edison ECHAVARRIA ဟုသူကပြောသည်
မွမ်းမံပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းသည်အောက်ဖော်ပြပါလက္ခဏာများကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည် -
EDISON ECHAVARRIA သို့ပြန်ပြောပါ
ငါ (iPhone အတွက်) update လုပ်ပြီးသည်နှင့်ယခုငါ iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ရ ... သစ်အယ်သီးသွားပါ! ၎င်းကို၎င်းအားလုံးပြန်လည်ထားရှိရန်နှင့် ၆.၅ ဒေါင်းလုပ်ယူရန်ကျွန်ုပ်၏မြို့မှ ၂.၇၅ GB ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ 2,75 ကို reboot လုပ်ပြီး boot လုပ်လိုက်ပါ။ ရုတ်တရက် support.apple.com/iphone/restore ကိုရပါတယ်
တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလား။
ကျွန်တော့်မှာ ၇ အပေါင်း ၂၅၆gb ရှိတယ်
blowjob မပြောနှင့်နှင့်အနည်းငယ်ပိုရှာမပြောပါနှင့်။ iOS 11.2.5 ကိုဘက်ထရီအငြင်းပွားဖွယ်ရာလူသိများခြင်းမပြုမီတီထွင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီများနှင့် Apple ကတိပြုခဲ့သည့်အတိုင်း iOS 11.3 နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
ဒီအဆင့်မြှင့်တင်မှုနဲ့ဘယ်လိုနေလဲ ငါ့မှာ Iphone 5S ရှိပြီးဗားရှင်း ၁၁.၂.၅ ကိုမွမ်းမံလို၊ မရဆိုတာကိုငါမသိဘူး။ ဘာကိုအကြံပြုလိုပါသလဲ?
အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူဘက်ထရီသည် ၆ နာရီအတွင်းစက်ကိရိယာကိုမသုံးပဲသူ့ဟာသူအရည်ပျော်သွားသည်။ သေစေသော။ ဒီ update ကိုငါဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲ။
Livan White Milian ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ ios6ပါတဲ့ iphone 11.1.1 ရှိတယ်။ အဲဒီ operating system နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကအရမ်းမြန်တယ်။ အကယ်လို့ငါ update လုပ်ရင်၊ ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလား။
Livan Blanco Milian သို့ပြန်သွားပါ
ငါ့မှာ iPhone6ရှိတယ်။ ငါအဲဒါကိုမွမ်းမံတဲ့အခါမှာသူကဆက်တိုက်ပြန်ဖွင့်ပြီးဘက်ထရီကိုတစ်ဝက်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုကြာတဲ့အချိန်မှာအားသွင်းပြီးစားသုံးမှုနည်းသွားတယ်။ ကိရိယာအားလုံးကိုမွမ်းမံရန်အကြံမပေးပါ။
HomePod ကို AppleCare + ဖြင့်ကာကွယ်ရန်စျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၃၉ ဖြစ်သည်
တိကွတ်ခ်သည် Animuke မှတစ်ဆင့် Duke တက္ကသိုလ်၌သူ၏မိန့်ခွန်းကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်